YHT လက်မှတ်စျေးနှုန်းများအတွက်မတန်တဆတက်ခြင်း! | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီYHT Subscription လက်မှတ်လက်မှတ်များအတွက်မတန်တဆတက်ခြင်း!
22 / 01 / 2020 06 တူရကီ, 26 Eskisehir, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, အစာရှောင်ခြင်းရထား, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ
yht subscription စျေးနှုန်းတိုးမြှင့်
ပုဂ္ဂလိကကဏ္ passenger သို့ခရီးသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ပြင်ဆင်ရန်အတွက် TCDD သည် YHT လိုင်းတွင် ၀ န်ဆောင်မှုလက်မှတ် ၃၀၀ ရာနှုန်းနီးပါးတိုးခဲ့သည်။ Eskişehir-Ankara လိုင်းရှိ ၀ န်ထမ်းများနှင့်ကျောင်းသားများနှစ်သက်သောရက် ၃၀ ပေးသွင်းရမည့်လက်မှတ်သည် lira 30 မှ lira 480 သို့တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
တစ်နေ့နေ့မှာဟန္နရဲ့ဇာတ်လမ်းအညီရာသီခွင်မှ: "ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ, ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးကျော်လက်ကိုပြင်ဆင်, တူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD) ၏သမ္မတနိုင်ငံ, အမြင့်မြန်နှုန်းရထား (YHT) 30-နေ့က subscription ကိုလက်မှတ်များ၏မတန်တဆအဆင့်ဆင့်မြှင့်ကိုပြု၏။ Eskişehir-Ankara လိုင်းရှိ ၀ န်ထမ်းများနှင့်ကျောင်းသားများနှစ်သက်သောရက် ၃၀ ပေးသွင်းရမည့်လက်မှတ်မှာ lira 30 မှ lira 480 သို့တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ အင်တာနက်နှင့်မိုဘိုင်းအရောင်းလမ်းကြောင်းများသို့ ၁.၅ ရာခိုင်နှုန်းလျှော့စျေးကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီ။ စီးပွားရေးလှည်းမှလက်မှတ်များကို ၀ ယ်မည့်ခရီးသည်အားလုံး၏လျှော့စျေး / အခမဲ့ခရီးသွားကဒ်များမခွဲခြားဘဲစီးပွားရေးအတန်းအစားအားအခကြေးငွေယူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
Devlet DemiryollarıTaşımacılık A.Ş. ခရီးသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာနသည်ရက် ၃၀ သက်တမ်းအတွက်လက်မှတ်နှင့်အတူအောက်ပါလိုင်းများအတွက်ရာဂဏန်းရာခိုင်နှုန်းကျော်မြင့်တက်ခဲ့သည်။ ပြုလုပ်ခဲ့သောတောင်တက်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya သည် TL ၄၈၀ မှ ၁.၆၈၇ သို့တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
Polatlı-Eskişehirသည် ၃၅၂ မှ ၂၆၀,၀၀၀ TL သို့တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
Ankara-Istanbul သည် ၂၀၀၀ ၁၀၀ မှ ၃၀၀၀ ၈၄၇ TL သို့တိုးလာခဲ့သည် (တိုးနှုန်းမှာ ၈၃ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်) ။
တိုးမြှင့်မှုအပြင်အထူးလျှော့စျေးများကိုလည်းဖယ်ရှားခဲ့သည်။ Devlet DemiryollarıTaşımacılık A.Ş. ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေး ဦး စီးဌာနညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန၏ဆုံးဖြတ်ချက်များသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
စီးပွားရေးလှည်းတစ်ခုမှလက်မှတ် ၀ ယ်သည့်ခရီးသည်အားလုံးသည်သူတို့၏အထူးလျှော့စျေး / အခမဲ့ခရီးသွားကဒ်များကိုမယူဘဲစီးပွားရေးအတန်းအစားကိုအပြည့်အ ၀ ကောက်ခံကြလိမ့်မည်။
စီးပွားရေးလှည်းများအတွက်အပြန်အလှန်လျှော့စျေး 15 ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ဆက်လက်ဆက်လက်လျှောက်ထားလိမ့်မည်။
အင်တာနက်နှင့်မိုဘိုင်းအရောင်းလမ်းကြောင်းများသို့ ၁.၅ ရာခိုင်နှုန်းလျှော့စျေးလျှော့ချလိုက်သည်။
စီးပွါးရေးဆိုင်ရာဘော်ဒါဆောင်များတွင် ၀ ယ်ယူမှု ၅ ခုမှ ၁၀၀၀၀ အထိနှင့်လူငယ်အခွန်နှုန်းထားများကိုဖယ်ရှား။ ၁၅ စီးစီးနင်းမှု ၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၂၀ စီးစီးနင်းသူ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်စီးနင်းအထူးလျှော့စျေးများကို ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ပြန်လည်စီစဉ်ခဲ့သည်။
စီးပွါးရေးဆိုင်ရာလေယာဉ်ပေါ်အခြေခံသောစာရင်းပေးသွင်းမှုများတွင်စီးနင်းသူ ၅ စီးမှ ၁၀ စီးကိုဖယ်ရှားပြီး ၁၅ စီးကို ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၂၀ ၂၀ စီး ၂၀ နှင့် ၃၀ စီး ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကိုအပြည့်အ ၀ နှင့်ငယ်ရွယ်သောအကောက်ခွန်နှုန်းထားဖြင့်စီစဉ်ခဲ့သည်။
YHT စီးပွားရေးလစဉ်ကြေးများအတွက်တရားဝင်ဖြစ်သော subscription packets (၅၀ ရာခိုင်နှုန်းလျှော့စျေး) နှင့်အတူအပြည့်အဝနှင့်ငယ်ရွယ်သော subscription များကို Ankara-Eskişehir၊ Ankara-Konya၊ Konya-Eskişehir, Polatlı-Eskişehirနှင့်Polatlı-Konya လမ်းကြောင်းများမှသတ်မှတ်ထားသောငွေပမာဏအတွက်ဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းလျှော့စျေးနှင့်သက်ဆိုင်သောသင်တန်းများအတွက်သက်တမ်းတိုးမည့်အစီအစဉ်အသစ်များကိုစတင်မည်။
YHT စီးပွားရေးလှည်းများတွင်လစဉ်ကြေးပေးသွင်းခြင်းအတွက်အကျုံး ၀ င်သည့် subscription package (၅၀ ရာခိုင်နှုန်းလျှော့စျေး) နှင့်အတူ၊ Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-Eskişehir, Polatlı-Eskişehirနှင့်အသုံးချခြင်းနှင့်အခကြေးငွေကောက်ခံခြင်းများကိုPolatlı-Konya လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းလျှော့စျေးနှင့် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းလျှော့စျေးများပါ ၀ င်သောစာရင်းပေးသွင်းခြင်းအစီအစဉ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်မည်။ လက်ရှိလေ့ကျင့်မှုအကြမ်းဖျင်းရထားပေါ်တွင်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီမှာ Bursa Uludag နှင်းလျှောစီးဖို့တုန့်ပြန်မတန်တဆတိုးနှုန်းအမိန့်ရုပ်သိမ်းပြီ
အဲဒီမှာ Uludag နှင်းလျှောစီး LIFT ၏စျေးနှုန်းအတွက်မတန်တဆတိုးတုံ့ပြန်
Ankara İstanbul YHT ကြေးပေးသွင်းခလက်မှတ်
Eskişehir Ankara YHT လက်မှတ်တွေရဲ့လက်မှတ်စျေးနှုန်းများ
YHT Abonman လက်မှတ်စျေးနှုန်းများ